34 Responses to “တူညီသော ချစ်ခြင်းတစ်စုံ”
တူတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်စုံတဲ့လား။ ဘယ်သူတွေများ ဒီလိုကုသိုလ်ထူးကြပါလိမ့်နော်.....
အင်းး မချောကတော့ အပျိုလေးတွေ၊ အပျိုကြီးတွေ အားကျအောင် လုပ်နေပြန်ပြီ ။။
အဲ့လို အဖိုးအို မျိုး ငယ်ငယ်တုံးက တွေ့ ခဲ့ မိရင် အကောင်းသား နော် ..
ခုတော့ .. ခုတော့ ..း))
ခုခေတ်မှာ သိပ်ကိုရှားပါးတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးပဲ...
ချောချောလဲ အဲဒီအဘိုးလို ယောက်ကျားမျိုးစုံတွေ့ရမှာပါ..။
ကျွန်တော် လည်း သဘောကြတယ်ဗျာ ငယ်အချစ် အနှစ်တစ်ရာတဲ့ အားကြတယ်ဗျာ အင်း ကျွန်တော် တို့ လဲ အတုယူ သင့်တယ်ထင်တယ်နော် သူငယ်ချင်းတို့ .....
ညီမလေးကတော့ စိတ်ညစ်ရင် တယောက်တည်း ငူငူလေးပဲ သီချင်းလေးတွေနားထောင်နေမိတတ်တယ် ။။။။။။။။။
ချော ရဲ့ စာကိုဖတ်ရတော့ ပါးနဲ့မားကို သတိရလိုက်တာ.........
ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင်ဆိုတဲ့ မေတ္တာမျိုးပေါ့နော်.. ကြည်နူးစရာပါပဲ... ခုခေတ်မှာတော့ ရှားပါးနေပြီပေါ့။
ကြည်နူးဖို့ ကောင်းလိုက်တာ ...း))
မာမီရယ် ရှာပေးကွယ်လို့ မပြောတော့ဘူး
ချောချောရေ ရှာပေးကွယ် စိတ်ညစ်လို့ လာပြီးစာဖတ်သွားတယ်....ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ....
:P and :D
အချိန်ကာလကို မှတ်ကျောက်အတင်ခံနိုင်တဲ့ အချစ်တွေပေါ့...။
အားတဲ့အချိန်ကျရင် တို့ဆီမှာ ချောအတွက် လက်ဆောင် လာယူလိုက်ဦးနော် .... :-)
မချောလည်း တူညီသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
မချောလည်း တူညီသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်..
အားကျ နေပြီလား ... ညီမလည်း ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်..
အင်း .. ဒီပို့စ်လေးဖတ်ရတာ စိတ်ထဲမှ တကယ်ကြည်နူးသွားတာ အမှန်ပဲဗျာ ...
ခုခေတ် စုံတွဲ၊ လင်မယား တွေကိုလည်း ဒီလို တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး တန်ဖိုးထား ချစ်စေချင်လိုက်တာ။ အဲလိုဆို ကျနော် တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ချမ်းသာ စရာကောင်းလိုက် မလဲနော်။ ကိုယ်ကလိုချင်ရင် ကိုယ်က အရင်ပေးရမှာပေါ့
အင်း ... တကယ်တန်းကျ အားလုံးကို လိုက်ညှိလို့မှ မရနိုင်တာ။ ဒီတော့ မချောပြောသလိုပဲ..
လူတိုင်းလူတိုင်း တူညီသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ ပေါ့ဗျာ...
ဒီအကြောင်းအရာက ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ဘူးဗျ။
ကျနော် ငယ်ငယ်က ဒီအကြောင်းကို တော်တော် ဆွေးနွေးဖူးတယ်။
လူတွေ ပြောပြောနေတဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ အချစ်မရှိဘူး။ sex ပဲ ရှိတယ် ဆိုတာ ကျနော် လက်မခံဘူး။
တကယ်တော့ မြန်မာတွေကသာ love ထက် sex ကို ပိုပြီး စိတ်ထဲမှာ ရှိနေကြတာ။
ဒီထက်လည်း ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပို့တင်မှပဲ ဖတ်ပါတော့။
ကိုယ်တိုင်လည်း ကောင်းအောင် လုပ်ရအုံးမယ်။
ကိုယ်မကောင်းရင်လည်း ကိုယ်နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့သူ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရနိင်တယ်။
အမ ရေ တူညီတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်စုံ ကို ဖတ်ပြီး၊ ခံစားသွားပါတယ်...ကြည်နူးဖွယ် နှင့်အတူ အားကျလိုက်တာနော် .......
ချောရေ.. မညလည်း တူညီသော မေတ္တာတစ်စုံကို အားကျလိုက်တာ။ ဆံပင်ဖြူလေးတွေ အပြန်အလှန်နှုတ်ကာ တစ်ယောက်ညောင်းရင် တစ်ယောက်နင်းကာ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးလိုပေါ့နော်။ ဒီပိုစ်ဖတ်တုန်း သူ့ဆီက ဖုန်းလာလို့ ဒီပိုစ်အကြောင်းလေး ဆက်ပြောလိုက်သေးတယ်။ သူက
ပြန်ဖြေတယ် “အင်း ဒါပေါ့” တဲ့..း))
ချစ်ခြင်းတရားဟာ....... ဘက်ညီမှ လှပတတ်တဲ့...... စိတ်ပန်းချီတစ်ချပ်လို့ ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်........။
အပြန်အလှန်နားလည်တဲ့ စာနာစိတ်လေးနဲ့ အခြေခံထားဖို့ပါပဲ။
မမရေ...တကယ်တမ်းကျတော့ လွယ်ပါ့မလား...ရှားမယ်ထင်တယ်နော်...ဒါပေမယ့် ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ...ငါ့အစ်မတစ်ယောက်ကတော့ ဒီပုံပြင်ထဲက အဘိုးလို လူမျိုးနဲ့ပဲ တွေ့ပါစေလို့...
(ကြင်နာခြင်း၊နားလည်ခြင်း ၊တွယ်တာခြင်း၊မြတ်နိုးခြင်း၊ အားကိုးခြင်း၊ရိုးသားခြင်း၊ ဖြူစင်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊............ ) အဲဒါတွေအားလုံး ပြည့်နှက်နေတဲ့ချစ်ခြင်း။မျက်လုံးထဲမှာ အဘိုးကအဖွားကိုထဖို့အထူ အဖွားကအဘိုးကို မော့်ကြည့်လိုက်တဲ့မျက်လုံး... အားကိုးချစ်ခင်ကြင်နာမြတ်နိုး တွယ်တာမျော်လင့်........... အားလုံးပြည့်နေတဲ့မျက်လုံး.. ရွန်းလဲ့တောက်ပနေတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံ။ နောက်အဘိုးကအဖွားကို ငုံကြည့်ပီးပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးတချက်... နုတ်ကမပြောပေမဲ့အဓိပါယ်တွေထောင်သောင်းပြည့်နေတဲ့..အပြုံးနဲ့အတူ အားကိုးစမ်းပါအမေကြီးရယ် ဆိုတဲ့အဓိပါယ်နဲ့ ကမ်းလိုက်တဲ့လက်တစုံ... အဖွားကလည်းရှင်ယုံကြည်အားကိုးပါတယ်ရှင်ဆိုတဲ့နူးညံတဲ့အပြုံးလေးတစ်ပွင့်နဲ့အားကိုးတကြီးဆုပ်ကိုင်လက်တဲ့လက်တစုံ... အရမ်းလှတယ်.... အရမ်းကြည်နုးတယ်.... ပန်ချီဆရာကျော်တွေတင်စားတဲ့ ဆေးစက်ကျရာအရုပ်ထင်တဲ့အလှမျိုးက ဒီလိုအလှမျိုးနေမယ်ထင်တယ်.... ချောလည်းပိုင်ဆိုင်ပါစေ..
အမြဲတမ်း နားလည်ခွင့်လွတ်နိုင်အောင် ..
တစ်ဘက်လူကလည်း အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ပြီး အမှားတွေ မလုပ်မိဖို့လိုတာပေါ့နော် ..။
ခွင့်လွတ်ချင်စရာမကောင်းအောင် လုပ်နေရင်တော့ ကြာလာလေလေ ဝေးလာလေလေ ဖြစ်မှာပဲ မမရယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိူးရနိုင်ဖို့ ဆိုတာ နှစ်ယောက်လုံးအပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့..
တလိုင်းချင်း တပိုဒ်ချင်း သေချာဖတ်သွားမိတယ်...
ပထမဦးဆုံးက အပိုအလိုမရှိ လိမ်မာသေသပ်တဲ့ အရေးအသားလေးကို ချီးကျူးမိပါတယ်...
ဒုတိယက... ရှု့ခင်းလေးတွေကို ချရေးပြထားပုံလေးတွေကို သဘောကျတယ်.... အဲ့ဒီနေရာလေးကို တကယ်ရောက်သွားတယ်
တတိယက ခုံလေးဖယ်ပေးလိုက်တဲ့ နေရာမှာ ရေးသူရဲ့ ကြင်နာတတ်မှုကို တွေ့လိုက်ရတော့ ပြုံးမိတယ်...
စတုထ္ထက စာထဲက ဖိုးဖိုးနဲ့ ဖွားဖွားရဲ့ မေတ္တာအေးတွေက ကိုယ့်ီကို ကူးစက်လာပြီး ကြည်နူးမိတယ်...
ကိုယ်တို့တွေသာ အဲ့ဒီ ဖိုးဖိုး ဖွားဖွား အရွယ်ရောက်ခဲ့ရင်....!!!!!!
ချောရေးတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အိုင်ဒီယာလေးတွေနဲ့ စာတွေ ဖတ်ဖို့ မျှော်နေမိတော့မှာပါ....
ချောရေး.. အချစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို အစက မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး။ ရယူခြင်းလား၊ ပေးဆပ်ခြင်းလားပေါ့။ နောက်တော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ရင်နှီးလာတော့မှ ကိုယ်ခံစားလိုက်ရတဲ့ အချစ်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုလိုက်မိတယ်။ အချစ်ဆိုတာ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး တူညီတဲ့စိတ်ထာနဲ့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းပဲလို့ပေါ့။ ချစ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာကြည့်ရင် သမီးရည်းစားအချစ်၊ မိဘသားသမီးအချစ်၊ မိတ်ဆွေချစ်ရယ်ပါ။ အချစ်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲများများ အဓိကသော့ချက်က ဖြူစင်သောစိတ်ထားနဲ့ အားလုံးကို ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးခြင်းဟာ အချစ်စစ်ထင်တယ်လို့ ပြောပါရစေ။
When can I get Nice life with my spouse? Until now, so lonely .......
မမချောရယ် ဖိုးဖိုးနဲ့ ဖွားဖွားကိုအားကျလိုက်တာ။ ဒီလိုအချစ်စစ်မျိုးကို လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ချင်ကြာတာပဲလေ.. ဒါပေမဲ့ နားလည်မှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီး ရည်စူးပြီးချစ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများ သည်းခံနိုင်မှုအားနည်းလို့ ကတောက်ကဆဖြစ်နေကြတဲ့ စုံတွဲတွေ အများကြီးတွေ့ဖူးတယ်... ဖိုးဖိုး ဖွားဖွားလိုသာနေကြရင် လောကကြီးတော့ လှပသာယာနေတော့မှာပဲနော်။ မမချောလည်း ဖို!
းဖိုးလို ချစ်သူမျိုး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ..
အင်း ဟုတ်တယ်နော် တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ အဲ့လို ဖြစ်သင့်တာ :)